Google Nest ine akati wandei mumapotifolio ayo kubva pamadhigirii uye makamera kuti Doorbells uye michina yeutsi.
Mune ino ficha, isu takatsanangudza ese matipi uye matipi anowanikwa kuti uve nechokwadi chekuti unowana zvakanyanya kubva pane zvako Nest Kudzidza Thermostat, kusanganisira magadzirirwo ayo uye magadzirirwo ayo Google Assistant uye Amazon's Alexa.
Nest Thermostat matipi uye matipi ekuronga
Maitiro ekuronga Nest Thermostat
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya iyo Schedule tab pazasi pechiratidziro.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo yekunze dial wachi kuenda kune iyo kalendari icon> Push iyo Thermostat kusarudza.
Maitiro ekuchinja tembiricha kana nguva pachirongwa cheNest Thermostat
PaNest app: Tinya paiyo Thermostat denderedzwa> Tinya pane iyo Rondedzero tebhu pazasi pechiratidziro> Tinya kamwe pazuva raunoda kushandura tembiricha kana nguva mukati> Dzvanya uye ubate imwe orenji tembiricha icon yaunoda kuchinja> Slide kumusoro kana pasi. kushandura tembiricha / Slide kuruboshwe kana kurudyi kuti uchinje nguva.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dhiya rekunze wachi kuenda kuchiratidzo chekarenda> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Tendesa dhiya rekunze wachi kana kuti anti-wachi kuti usarudze imwe yemifananidzo yekushisa yeorenji> Push thermostat kusarudza> Push thermostat zvakare kusarudza. Shandura > Shandura dhiya rekunze wachi kana kuti anti-clockwise kuti uchinje nguva > Push thermostat kuti usarudze kana wasvika panguva yaunoda > Tendesa dhiya rekunze wachi kana kuti anti-clockwise kuti uchinje tembiricha > Push thermostat kusarudza nguva. unosvika pakudziya kwaunoda.
Maitiro ekubvisa tembiricha kubva pachirongwa cheNest Thermostat
PaNest app: Tinya pane iyo Thermostat denderedzwa> Tinya pane iyo Rongedzo tebhu pazasi pechiratidziro> Tinya kamwe pazuva raunoda kushandura tembiricha mukati kuti uende kuchiratidziro chitsva nezuva iroro chete> Tinya Bvisa mukona yezasi yekurudyi schedule screen> Tinya pane tembiricha yaunoda kubvisa.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dhiya rekunze wachi kuenda kuchiratidzo chekarenda> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Tendesa dhiya rekunze wachi kana kuti anti-wachi kuti usarudze imwe yearenji tembiricha icons> Push thermostat kusarudza chiratidzo> Push thermostat zvakare. kusarudza Bvisa.
Maitiro ekuwedzera tembiricha kuhurongwa hweNest Thermostat
PaNest app: Tinya pane iyo Thermostat denderedzwa> Tinya pane iyo Rongedzo tebhu pazasi pechiratidziro> Tinya kamwe pazuva raunoda kushandura tembiricha mukati kuti uende kuchiratidziro chitsva nezuva iroro chete> Tinya pa Wedzera mukona yezasi yekurudyi iyo purogiramu skrini> Tinya pane nguva yaunoda kuwedzera tembiricha.
Iwe unogona ipapo kugadzirisa tembiricha nekudzvanya uye kubata denderedzwa rakawedzerwa uye uchisimudzira kumusoro kana pasi.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dhiya rekunze wachi kuenda kuchiratidzo chekarenda> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Shandura dhiya rekunze wachi kana kuti rinopesana newachi kuti usarudze panguva yaunoda kuwedzera hurongwa> Push thermostat kusarudza> Push thermostat. zvakare kusarudza Nyowani.
Maitiro ekukopa hurongwa hwezuva paNest Thermostat
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya iyo Rondedzero tebhu pazasi pechiratidziro> Dzvanya uye ubate zuva raunoda kukopa> Dzvanya kopi> Namira mumazuva aunoda kuti purogiramu idzokororwe.
Maitiro ekukopa hurongwa hwevhiki paNest Thermostat
PaNest app: Tinya padenderedzwa reThermostat> Tinya iyo Rondedzero tebhu pazasi pechiratidziro> Tinya paKopi Vhiki mukona yezasi kuruboshwe rwechirongwa chechirongwa> Tinya paNamira Vhiki kutsiva hurongwa hwevhiki.
Nest Thermostat matipi uye matipi ekudziya
Mashandisiro eNest Thermostat
Kukwidza tembiricha kumusoro kana kudzika paNest Thermostat, zviri nyore.
PaNest app: Tinya padenderedzwa reThermostat> Tinya kumusoro kana pasi miseve kuti uwedzere kana kuderedza tembiricha.
PaNest Thermostat: Shandura dial yekunze wachi kana kuti anti-clockwise kuti uwedzere kana kuderedza tembiricha.
Maitiro ekudzima kupisa kwako paNest Thermostat
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya Modhi muzasi kuruboshwe rwechidzitiro> Sarudza Off.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dhiya rekunze kuenda kuModhi> Push iyo Thermostat zvakare kuti usarudze kubatidza kana kudzima kupisa, zvichienderana nekuti yakabatidzwa sei.
Maitiro ekubatidza Eco Mode paNest Thermostat yako
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya iyo Eco tebhu pazasi pechidzitiro> Sarudza Tanga Eco.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura dial yekunze wachi kuenda kushizha> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Push iyo Thermostat zvakare kana Start Eco Mode yaratidzwa muBlue.
Isu tine Eco Mode yedu yakaiswa ku9-degrees Celsius.
Maitiro ekuchinja tembiricha yeEco Mode paNest Thermostat yako
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya paSettings cog mukona yekurudyi yechidzitiro> Skroka pasi kuEco Temperature muchikamu cheSarudzo> Sarudza tembiricha yaunoda kuti imba yako ive pairi kana Eco Mode yakabatidzwa.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo yekunze dial wachi kuenda kuSettings cog> Push iyo Thermostat kusarudza> Tendesa dhiya rekunze newachi kuburikidza nematenderedzwa eblue kusvika wasvika Eco> Push thermostat kusarudza> Push thermostat zvakare paHeat To box> Shandura dial newachi kuti uwedzere tembiricha yeEco uye anti-clockwise kuti ideredze> Push thermostat kuratidza tembiricha> Tendesa dhiyairi newachi kuti uenderere pasi kuDone> Push thermostat kuti usarudze.
Maseta sei tembiricha yekuchengetedza paNest Thermostat yako kudzivirira mapaipi akagwamba
PaNest app: Tinya padenderedzwa reThermostat> Tinya paSettings cog iri pakona yekurudyi yechidzitiro> Skroka pasi kuenda kuSafety Temperature muchikamu cheSarudzo> Sarudza tembiricha shoma yaunoda kuti Nest Thermostat ishande kunyangwe ichidzima.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dial yekunze wachi kuenda kuSettings cog> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Tendesa dhiya rekunze newachi kuburikidza nematenderedzwa eblue kusvika wasvika Kuchengetedzwa Demo> Push thermostat kusarudza> Push thermostat zvakare paHeat Kubhokisi. > Shandura dial wachi kuti uwedzere Tembiricha yekuchengetedzeka uye anti-clockwise kuti ideredze > Push thermostat kuratidza tembiricha > Tendesa dial wachi kuenda pasi kuDone > Push thermostat kusarudza.
Maitiro ekugadzirisa kuti Nest Thermostat ichatanga kupisa kwenguva yakareba sei
PaNest app: Tinya padenderedzwa reThermostat> Tinya paSettings cog kumusoro kurudyi> Tinya paChokwadi-Radiant> Sarudza iyo yakareba nguva yaunoda kuti Nest itange kupisa imba yako.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo dial wachi kuenda kuSettings cog> Push iyo Thermostat kusarudza> Shandura dial newachi kuburikidza nematenderedzwa eblue kudzamara wasvika paNest Sense denderedzwa> Push iyo Thermostat kusarudza> Tendesa dhiya kuti utsike pasi kuenda kuChokwadi. Radiant> Push the Thermostat kuti usarudze> Shandura dial kuti uende kuMax Duration> Push the Thermostat kuti usarudze> Sarudza nguva yako yakakura nekushandura dial kuti uchinje maawa> Push thermostat kuti usarudze.
Nest Thermostat general matipi uye mazano
Maitiro ekuchinja tembiricha paNest Thermostat yako
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya paSettings cog mukona yekurudyi yechidzitiro> Skroka pasi kuenda kuSafety Temperature muchikamu cheSarudzo> Tembiricha zvikamu> Sarudza Fahrenheit kana Celsius.
Iyo unit yakanamirwa mubhokisi jena ndiyo unit yawasarudza.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo dial wachi kuenda kuSettings cog> Dzvanya iyo Thermostat mukati kuti usarudze> Shandura dial newachi kuburikidza nematenderedzwa ebhuruu kusvika wawana tembiricha unit> Push thermostat kuti usarudze iyo unit.
Maitiro ekuchinja pakati peawa gumi nemaviri kusvika makumi maviri nemana paNest Thermostat yako
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo dial wachi kuenda kuSettings cog> Dzvanya iyo Thermostat mukati kuti usarudze> Shandura iyo dial newachi kuburikidza nematenderedzwa ebhuruu kudzamara wawana iyo Zuva neNguva sarudzo> Push iyo Thermostat kusarudza> Tendesa iyo dial yekunze wachi kana anti. -Cclockwise kusarudza pakati pe12-awa ne24-awa> Push the Thermostat kusarudza.
Maitiro ekushandura kupenya kweNest Thermostat
PaNest Thermostat: Pushira iyo Thermostat> Tendesa dhiya rekunze richienda newachi kusvika iyo Settings cog yaratidzwa> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Tendesa dhiya rekunze newachi kuburikidza nemadenderedzwa ebhuruu kusvika wasvika Kupenya> Push thermostat kuti usarudze kupenya kwaunoda. Sarudzo dzako ndedze Auto, Low, Medium and High.
Maitiro ekushandura zvinoratidzwa neNest Thermostat paunosvika
Iyo Nest Thermostat ine chinhu chinodaidzwa kuti Farsight pabhodhi chinoratidza imwe yedzimwe sarudzo kana iwe uri pedyo. Iyi ficha inogona zvakare kudzimwa saka iyo Thermostat inoratidzira inongouya chete kana iwe uchiswedera pairi, kana kudzima zvachose kusvika waidzvanya.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo dial wachi kuenda kuSettings cog> Dzvanya iyo Thermostat mukati kuti usarudze> Shandura iyo dial newachi kuburikidza nematenderedzwa ebhuruu kusvika wawana Display> Sarudza imwe yesarudzo yekuratidzira kana uri kushandisa Farsight nekutendeudzira dhiyari wachi. kudzamara wasvika pane yaunoda> Push the Thermostat kuti usarudze> Shandura dial wachi kuenda kuDone> Push to Select.
Sarudzo dzinosanganisira: Target Temperature, Current Temperature, Analogue Clock, Digital Clock > Mamiriro ekunze. Pazasi pezvisarudzo, iwe uchaona sarudzo kana iwe usingade kushandisa Farsight.
Maonero enhoroondo yesimba rako paNest Thermostat
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya iyo Nhoroondo tebhu pazasi pechidzitiro. Mazuva gumi enhoroondo yesimba achabva aonekwa, achikuratidza kuti mangani emaawa ekudziya kwako.
Mamwe mapindiro achange aine zvidhori zvidiki kurudyi kweorenji bar. Munhu ari mudenderedzwa zvinoreva kuti kugadzirisa kwako kwakakonzera kushandiswa kwesimba pamusoro kana pasi peavhareji yevhiki. Gore mudenderedzwa zvinoreva mamiriro ekunze akakonzera kushandiswa kwesimba pamusoro kana pasi peavhareji yevhiki nevhiki.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dial kuChiratidziro cheNhoroondo> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Shandura dial anti-clockwise kuti ufambe nemazuva akasiyana.
Maitiro ekudzima chikamu chekudzidza cheNest Thermostat
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya paSettings cog kumusoro kurudyi> Tinya paOtomatiki-Schedule> Bvisa kudzidza.
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Tendesa dial wachi kuenda kuSettings cog> Push iyo Thermostat kuti usarudze> Shandura iyo dial newachi kuburikidza nemadenderedzwa ebhuruu kudzamara wasvika paNest Sense denderedzwa> Push thermostat kusarudza> Push thermostat zvakare kuti usarudze Auto-. Rongedza> Shandura dhivhi kuti utsikire pasi kuenda ku Off> Push thermostat kuti usarudze.
Maitiro ekuseta Nest Thermostat yako kuti igadzirise yega kana usipo kumba
PaNest app: Tinya paThermostat denderedzwa> Tinya paSettings cog kumusoro kurudyi> Tinya paKumba/Kure Batsira> Toggle Shandisa tembiricha yeEco kana uchida kusevha simba woga.
PaNest Thermostat: Push the Thermostat > Shandura dial wachi kuenda kuSettings cog > Push the Thermostat kuti usarudze > Push thermostat zvekare kuti usarudze Kumba/Kure > Push thermostat zvekare kuti usarudze Mira Kushandisa kana Shandisa Eco, zvichienderana nemaseting azvino.
Maitiro ekuseta Nest neGoogle Mubatsiri
Google ndeyayo Nest, uye makambani maviri aya atonyanya kubatanidzwa kupfuura zvaaive pakutanga. Zviri nyore kubatanidza account yako yeNest Imba yeGoogle yekudzora inzwi kuburikidza neGoogle Assistant.
Vhura iyo Google Home app > Dzvanya Wedzera (+) > Dzvanya Seta mudziyo > Midziyo mitsva > Tsvaga Nest > Batanidza account yako.
Kana yangobatanidzwa, iwe unokwanisa kukumbira Google Mubatsiri kuti akwidze tembiricha kana kudzima kupisa.
Maitiro ekubatanidza Nest kuAmazon Alexa
Nest inoshanda neAmazon Alexa saka kana uine Amazon Echo or Alexa-inoenderana mudziyo, unogona kudzora Nest Thermostat yako kuburikidza neAmazon Alexa.
Vhura Amazon Alexa app> Tinya pamitsetse mitatu iri kumusoro kuruboshwe> Tinya paUnyanzvi neMitambo> Tsvaga Nest> Tinya paNest Thermostat> Dzvanya Gonesa Kushandisa> Saina muNest Account yako.
Avo vane Sonos One, Sonos Beam kana Sonos Arc, inogona kudzora Nest kuburikidza neAlexa kana Google Mubatsiri sezvo vatauri vanotsigira vese vabatsiri.
Maitiro ekudzima kana kudzima ruzha rweNest Thermostat
PaNest Thermostat: Pusha iyo Thermostat> Shandura iyo dial wachi kuenda kuSettings cog> Push iyo Thermostat kusarudza> Shandura dial newachi kuburikidza nematenderedzwa eblue kusvika wasvika Tinya Ruzha> Push thermostat kusarudza> Push thermostat zvakare kuti usarudze kubatidza kana kudzima.
Maitiro ekuseta patsva Nest Thermostat yako
PaNest Thermostat: Push the Nest Thermostat> Tendesa dial yekunze wachi kuenda kuSettings cog> Shandura dial kuburikidza nemadenderedzwa eblue kudzamara wasvika paReset sarudzo> Push thermostat kuti usarudze.
Maitiro ekukiya yako Nest Thermostat
PaNest Thermostat: Pushira Nest Thermostat > Tendesa dial yekunze wachi kuenda kuSettings cog > Push the Nest Thermostat kuti usarudze > Shandura dial nematenderedzwa eblue kusvika wasvika paKiya sarudzo > Push thermostat kuti usarudze > Push thermostat futi kuti Kiya Nest yako. Thermostat.
Kukiya Nest Thermostat yako zvinoreva kuti zvinoda pini kuti uchinje marongero pairi kuitira avo vane vana kana kana uine vaenzi.